သင်္ကြန်သီချင်းများ | Myanmar Mp3 Album
Home / Myanmar Artist / သင်္ကြန်သီချင်းများ
Category Archives: သင်္ကြန်သီချင်းများ
၀င်ဦး သင်္ကြန် တေးရေး ….. ရွှေပြည်အေး ၊ မြို့ မငြိမ်း ၊ စန္ဒရား လှထွဋ် ၊ ၀င်းဦး တေးဂီတ …. စန္ဒရားလှထွဋ် ၊ အေ၀မ်းဦးခင်မောင် ၊ စိန်အေးမြင့် အသံဖမ်း …. ဦးခင်မောင်ဦး စိန်မောင် စတူဒီယို ခုနှစ် ……… ၁၉၉၃ ခန့် မှန်း မူပိုင် ……… ယင်းမာတေးသံသွင်း တေးသံသွင်းဆိုင် တစ်ခုမှ ကူးယူပါသည် ၀၁ မြနန္ဒာ ၀၂ ပန်းပိတောက် သက်သေ ( + တင်တင်မာ ) ၀၃ ပျော်ပါစေ မောင်မယ်တွေ ၀၄ မီးစိမ်းလေးပြပါလားကွယ် ၀၅ ပိတောက်တစ်ခက် ချစ်လက်ဆောင် ၀၆ ပြည်တော်ဝင် … Continue Reading →
April 3, 2013 Snuo Mwoani ၀င်းဦး သင်္ကြန်သီချင်းများ Myanmar Oldie Albums Leaveacomment
နှစ်ဦးကြိုလေပြီ – ဆုတင်
နှစ်ဦးကြိုလေပြီ – ဆုတင် သင်္ကြန်တေးသီချင်းများ ၀၁။ ပျော်သလားဟေး – ဆုတင် http://sutin.minus.com/lbeA42yD1xCrRa ၀၂။ နှစ်ဦးကြိုလေပြီ – ဆုတင် http://sutin.minus.com/lNeUEFGgL8Cqj ၀၃။ ရှာပုံတော်မင်းသားကြီး – ဆုတင် http://sutin.minus.com/lQ2smyMyce8iy ၀၄။ ရက်မြတ်သင်္ကြန် – ဆုတင် http://sutin.minus.com/lQPvNjgzlXwIe ၀၅။ မိုးနတ်မယ် – ဆုတင် http://sutin.minus.com/lF7tRzMJWJrGM ၀၆။ စိတ်စိုးမှာလား – ဆုတင် http://sutin.minus.com/lbhh1cKdOHDHav ၀၇။ အိပ်မက်စေတမန် – ဆုတင် http://sutin.minus.com/lbxw9t08qO2i2a ၀၈။ နုယဉ်လာပြီ – ဆုတင် http://sutin.minus.com/lpav61s9VdfLe ၀၉။ ပိတောက်ပွဲ – ဆုတင် http://sutin.minus.com/lwPrlfbsDHpp6 ၁၀။ အရှက်ပြေ – ဆုတင် http://sutin.minus.com/lFlLYSPnpWnWf ၁၁။ … Continue Reading →
March 23, 2013 Snuo Mwoani အဆိုတော် (ကျား) အခွေ (တကိုယ်တော်) ဆုတင် သင်္ကြန်သီချင်းများ Leaveacomment
ပိတောက်ဖူးတိုရင်ခုန်သံ – မေဆွိ
01. မိုးမင်းသင်္ကြန် 02. အတာသင်္ကြင်္န ဂိမှန် နွေ 03.နံ့သာလူးတဲ့အတာတန်ခူး 04. ဖြူစင်စိတ်ရင်း 05. ရင်တွေခုန် ခုန်လွန်းတယ် 06. သင်္ကြင်္န တေး ၊ ပျော်ရွှင် သင်္ကြန် 07. ပိတောက်ဖူးတိုရင်ခုန်သံ 08. တန်ခူး နွေ 09. တန်ခူးလေပြည် 10. သာစွဌာနီ 11. ပန်းပေါင်းဝေဆာ 12. သင်္ကြန်ကိုကို ၊ အရောက်လာခဲ့ကွယ် 13. အလှသစ်နဲ့သင်္ကြန် http://www.mediafire.com/?zj5fw23uw4twjfv Credit – Ko Tin Tun
March 9, 2013 Snuo Mwoani အဆိုတော် (မ) အခွေ (တကိုယ်တော်) မေဆွိ သင်္ကြန်သီချင်းများ Leaveacomment
သင်္ကြန်အိပ်မက် – လွှမ်းပိုင် + Bobby Soxer(VCD DAT File)
Song Name : သင်္ကြန်အိပ်မက် Vocal : လွှမ်းပိုင် + Bobby Soxer Album : မာစတာသင်္ကြန် ၂၀၁၂ Download With Mediafire CREDIT TO MHC
March 23, 2012 [email protected] လွှမ်းပိုင် သင်္ကြန်သီချင်းများ Bobby Soxer MTV Myanmar Artist New Myanmar Albums Leaveacomment
ပိုပို – ပိတောက်တွေဝေတဲ့သင်္ကြန်
MMA ပရိတ်သတ်ကြီးအတွက် သင်္ကြန်သီချင်းအသစ်လေးဖြစ်ပါတယ်.. တေးရေး/ဆို ပိုပို ပါပဲ Rap မှာကူညီအားဖြည့်ပေးထားတာက Demojittuu ပါ။
March 12, 2012 popolay အဆိုတော် (မ) ပိုပို ၀ါသနာရှင် အခွေများ သင်္ကြန်သီချင်းများ Myanmar Artist Demojittuu popo Leaveacomment
U.N.C 2nd Mini Album- ရွချက်က 99.9 (Party Edition)
1. Me & You (Feat- Sparrow & Wai Linn) 2. TakeaBig Shake 3. ရွချက်က 99.9 (Party Edition) 4. အကုန်လုံးက Download With Mediafire
April 3, 2011 MyanmarHipHopChannel.Com အခွေ (အများ) သင်္ကြန်သီချင်းများ Media Myanmar Artist Unreleased Albums UNC Leaveacomment
MC Double Nyi & TG & Tay Za MC Ft: Po Po – သင်္ကြန်ဗြွတ်
April 1, 2011 koyazar သင်္ကြန်သီချင်းများ Tay Za MC Unreleased Albums Leaveacomment
Po Po – သင်္ကြန်မှာလာပျော်စမ်းပါ (ယူ)
ဒီသီချင်းလေးက “သကြန်မှာလာပျော်စမ်းပါ (ယူ)” ဖြစ်ပါတယ်။ သူလည်း မြူးမြူးကြွကြွ သံစဉ်လေးတွေနဲ့ ပိုပို(၀က်ကလေး) တစ်ယောက်တည်းဆိုထားတာပါ.. နားထောင်ပြီးအားပေးဝေဖန်ပေးကြပါဦးလို့။ ။
April 1, 2011 popolay အဆိုတော် (မ) ၀ါသနာရှင် အခွေများ သင်္ကြန်သီချင်းများ Myanmar Artist Po Po Leaveacomment